DaNa Facility Unveils Report on Kachin State’s SME Ecosystem | Myanmar Business Today
Home Business Local DaNa Facility Unveils Report on Kachin State’s SME Ecosystem
DaNa Facility Unveils Report on Kachin State’s SME Ecosystem
UK Aid-funded DaNa Facility and Cordaid recently unveiled their study, “The Ecosystem for Small and Medium-Sized Enterprises in Kachin State” at an event attended by Kachin State government officials, donors, humanitarian and development practitioners, local enterprises and other key stakeholders.
“Understanding the private sector landscape in Kachin and the challenges SMEs face is essential for creating new opportunities for inclusive growth – growth that creates economic opportunities for poor communities and internally displaced persons,” said Thomas Coward, team leader of DFID Myanmar’s Inclusive and Livelihoods team.
The study aims to provide donors and the development community withabetter understanding of the challenges faced by small and medium-sized enterprises across Kachin, withaparticular emphasis on enterprises run by internally displaced persons.
“We are pleased to see this report includes the SME landscape beyond Myitkyina, and I see this asavery inclusive and comprehensive report that showsapossible roadmap to support SMEs in Kachin State, particularly in the agriculture sector,” said Kyaw Min Oo, president of the Bhamo Young Entrepreneurs’ Association.
Understanding the SME landscape in Kachin State has the potential to create economic opportunities for people from poor communities and for groups that commonly face social and economic disadvantages, such as women, people with disabilities and people living in conflict-affected regions.
The study also looked into SMEs’ accessibility to financial services well as availability of raw materials and connection to local and foreign markets.
The report is available online at: http://www.danafacility.com/wp-content/uploads/2020/02/DaNa_SME_Kachin_Report_DIGITAL.pdf.
ကချင်ပြည်နယ်၏ အသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ရှေ့ဆောင်လေ့လာမှု အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ယူကေနိုင်ငံမှပံ့ပိုးထားသော DaNa Facilityနှင့် Cordaid တို့က “ကချင်ပြည်နယ်ရှိ အသေးစားအလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ဂေဟာစနစ်” သုတေသနပြုလုပ်ထားသည့် ရှေ့ဆောင်အစီရင်ခံစာတစ်ရပ်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယင်းအစီရင်ခံစာအပေါ် ဆွေးနွေးပွဲကို ကချင်ပြည်နယ်၊ Myitkyina Palm Spring Resortတွင် ကျင်းပ ခဲ့ပြီး ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူများ၊ အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူသားချင်းစာနာ ထောက် ထားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍတွင် ဆောင်ရွက်နေသူများ၊ ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အခြားသောအဓိကပူးပေါင်းပါဝင်သူများတက်ရောက်ခဲ့သည်။
ကချင်ပြည်နယ်၏ ပုဂ္ဂလိကအခန်းကဏ္ဍရပ်တည်မှုနှင့် SMEကဏ္ဍများ ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံနေရသည့် စိန်ခေါ်မှုတွေကို နားလည်ရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်ဟု DFID မြန်မာ၏ အများပါဝင်အကျိုးခံစားနိုင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဌာနခေါင်းဆောင် Thomas Coward ကပြောသည်။
“ ဒါကိုနားလည်မှ အားလုံးပါဝင်အကျိုးခံစားနိုင်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အခွင့်အလမ်းအသစ်တွေ ဝင်ငွေနည်းပါးတဲ့ရပ်ရွာနေလူထုနဲ့ နေရပ်စွန့်ခွာရွေ့ပြောင်းရသူတွေအတွက် စီးပွားရေးဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းနဲ့ တိုးတက်မှုတွေကို ပေးနိုင်မှာပါ” ဟု၎င်းကဆိုသည်။
ယင်းအစီရင်ခံစာတွင်ပါဝင်သော သုတေသနလုပ်ဆောင်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ အလှူရှင်အဖွဲ့ အစည်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍတွင်ဆောင်ရွက်နေသူများ၊ အသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းများ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ နေရသော စိန်ခေါ်မှုများ၊ အထူးသဖြင့်နေရပ်စွန့်ခွာရွေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ ဆောင်ရွက်ရသောလုပ်ငန်းအပေါ် ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်လာစေရန်ဖြစ်သည်။
“ ဒီအစီရင်ခံစာမှာ မြစ်ကြီးနားအလွန် SMEကဏ္ဍပါဝင်တာမြင်ရလို့ ကျေနပ်မိပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ် မှာရှိတဲ့ SMEတွေ၊ အထူးသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးအခန်းကဏ္ဍကို ပံ့ပိုးပေးမယ့် အများပါဝင်အကျိုးခံစားနိုင်တဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့လမ်းညွှန်အစီရင်ခံစာတစ်ခုအဖြစ် ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်” ဟု ဗန်းမော်လူငယ် စွန့်ဦးတီထွင်သူများအဖွဲ့၏ ဥက္ကဌဦးကျော်မင်းဦးက ဆိုသည်။
SME အခန်းကဏ္ဍကို နားလည်ခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေနည်းပါးသောရပ်ရွာလူထုနှင့် အမျိုးသမီး၊ မသန်စွမ်းသူ နှင့် ပဋိပက္ခသက်ရောက်သောဒေသများတွင် နေထိုင်သူများကဲ့သို့ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးဒုက္ခများကို ရင်ဆိုင် ရသောဒေသများအတွက် စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်ရန် အလားအလာရှိကြောင်း အစီရင်စာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အပြင် အစီရင်ခံစာ၏ သုတေသနပြုစုချက်များတွင် SMEလုပ်ငန်းများ၏ ငွေရေးကြေးရေး ဝန်ဆောင် မှုများ လက်လှမ်းမီရရှိမှု၊ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများစုဆောင်းရယူမှုနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက်များသို့ ချိတ်ဆက်မှု များပါဝင်သည်။
အစီရင်ခံစာကို The Ecosystem for Small and Medium-Sized Enterprises in Kachin State အဆိုပါ Link တွင်ဖတ်နိုင်ပြီး ကချင်ပြည်နယ်၏ လူနေမှုအခြေပြုဇယားများ ၊ ဒေသရှိ SME လုပ်ငန်းများနှင့် အလားအလာများ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအခြေအနေ၊ ဘဏ်အသုံးပြုမှှုစသည့်အကြောင်းများကို ဖော်ပြထားသည်။
Previous articleCBM Considering Revising Policy Rate
Next articleAutoShow Mandalay 2020 to Showcase International Brands